Ukuhamba kweGulliver ngohambo lukaJonathan Swift
Iincwadi Abalobi kunye neMibhalo
Uhambo lweGulliver Uhambo lukaJonathan Swift
Kukho abambalwa abakhulu abahlukumezayo abalawula ukugweba umsebenzi wabo ngokukhawuleza ukuba unokuqwalaselwa ngumbali wokugubungela, wefantastic ibali elifanelekileyo kubantwana nakwabantu abadala, kunye nokuhlaselwa okubonakalayo kwimeko yoluntu. Kwiihambo zakhe zeGulliver , uJonathon Swift wenze ngokuchanekileyo kwaye usinike enye yemisebenzi emihle yeencwadi zesiNgesi kule nkqubo. Iqonga eliye laziwa ngokubanzi kunokuba lifundwa, ibali likaGulliver - umhambi ojikelezayo, umntu omkhulu, umfanekiso omncinci, ukumkani kunye ne-idiot no bulumko.
Uhambo olubhekiselelwe kwisihloko sika-Swift lunamanani kwaye luhlala luqala ngesiganeko esibi esishiya i-Gulliver yinqanawa, ishiywe okanye ilahlekelwe ngenye ilwandle. Ngokuqala kokungahambi kakuhle, uhlambulukile emanxwemeni aseLilliput aze avuke ekuzibophelelweni ngamakhulu angamakhulu. Ngokukhawuleza uyaqonda ukuba uyithunjwa kwilizwe labantu abancinci; xa kuthelekiswa nabo, ungumntu omkhulu.
Ngokukhawuleza abantu bafaka i-Gulliver ukuba isebenze-yokuqala yokuqala yendima yobunobumba, ngoko imfazwe nabantu abakhelene nabo ngendlela efanelekileyo ukuba iqanda liqhekeke ngokufanelekileyo. Abantu baphendukela kuye xa uGulliver ekhupha umlilo kwibhotwe ngokuvota kuyo.
UGulliver ulawula ukubuyela ekhaya, kodwa ngokukhawuleza ufuna ukuphuma ehlabathini kwakhona. Ngeli xesha, ufumene kwilizwe apho elincinane xa kuthelekiswa namaqhawe ahlala khona. Emva kobudlelwane obusondeleyo kunye nezilwanyana ezinkulu ezithatha umhlaba, kwaye uzuze udumo oluthile ngobukhulu bakhe obukhulu, ubalekela i-Brobdingnag - indawo awayithandiyo ngenxa yobuninzi babantu bayo-xa intaka iphakamisa i-cage apho uhlala kwaye ahlasele elwandle.
Ngehambo lwakhe lwesithathu, iGulliver udlulela kwinani lamazwe, kubandakanywa nomntu ongokoqobo abe nekhanda lakhe emafini. Umhlaba wabo uhamba phezu komhlaba oqhelekileyo. Aba bantu bahlaziywe ngengqiqo abachitha ixesha labo kwimisebenzi engabonakaliyo xa abanye behlala phantsi - njengezigqila.
Uhambo lokugqibela lukaGulliver luya kummandla osondeleyo. Uyazifumana ehlabathini lamahashe athetha, abizwa ngokuthi yiHouhnhnms, alawula umhlaba wehlabathi onobunzima, obizwa ngokuthi nguYahoos. Uluntu luhle - ngaphandle kobundlobongela, ubuncwane okanye ukuhaha. Zonke iifama zihlala kunye ndawonye kwinqanaba lezentlalo. UGulliver uvakalelwa kukuba uyisidenge. I-Houyhnhnms ayikwazi ukumwamkela ngenxa yesimo sakhe somuntu, kwaye uyasinda esinqanaweni. Xa ebuyela ekhaya, uyacaphukiswa ngumntu onobuqhetseba behlabathi kwaye ulindele ukuba ubuyele kunye namahashe athile ayenayo.
Ubungcali kunye neengqiqo, i- Gulliver's Travels , ayikho nje ibali le-adventure elihle. Kunoko, nganye yehlabathi i-Gulliver ukutyelela ibonisa iimpawu zehlabathi apho i-Swift ihlala khona-kaninzi ifakwe kwi- caricatured , ifom ehluthweyo esisitokisini kwintengiso ye-satirist.
Iingxoxo zinikwe impembelelo enkosini kuxhomekeke ekusebenzeni kwabo ngokugqithisa ngamacangci: i-sidespep in politics. Iingcamango zineentloko zawo emafini xa abanye behlupheka: ukubonakaliswa kweengqondo zexesha lika-Swift. Kwaye ke, ngokugqithiseleyo, ukuzithembela komntu kuboniswe xa sikhatyathwa njenge-Yahoos engenazo izilwanyana.
I-brand ye-Gulliver ye-misanthropy ijoliswe ekuhlaleni nasekuphuculeni uluntu ngokusebenzisa ifomu elikude kunoma yiluphi udidi olunzulu lwezopolitiko okanye zentlalo.
I-Swift inesiliso sokubheka umfanekiso obalaseleyo, kunye nokuxhalaba, okuvame ukuhlambalaza. Ngo kubhala i- Gulliver's Travels , uye wadala umlenze oqhubekayo kwixesha lethu nangaphezulu.
Ukuhlaziywa kwe 'Don Quixote'
Kate Chopin: Ukufuna iNkululeko
I-Shakespeare's Comedy 'Eninzi Ado malunga Nento'
Uluhlu lweeMisebenzi nguJames Fenimore Cooper kwiVasacious Readers
Romeo kunye noJuliet ukusuka 'kwiindaba ezimnandi ezivela kuShakespeare'
Ukuhlaziywa kwe- 'Walden,' Yanyatheliswa ngo-1854
U-Edgar Allan Poe 'ILake'
IKrisimesi ekhethekileyo kaPapa Panov: i-Synopsis kunye nohlalutyo
'Iidventures zikaTom Sawyer'
"Iphepha Elimhlophe" (1892) nguCharlotte Perkins Gilman
Umyinge weSizwe weSAT izikolo ze-2015
IRaptile okanye i-Amphibian? Inkcazo engundoqo
Abemi besiGaba esiPhakamileyo ngabemi
Indlela yokubuyela emva kwi-Skateboarding
Iifayile ze-Smartphone ezingcono kwi-Writing Poetry
Imfazwe Yehlabathi II: USS Bunker Hill (iCV-17)
"Qui la voce sua soave" Iingoma kunye neNguqulelo Yombhalo
Iingcambu Zemiba Ye-Revolution yaseMerika
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi esingavumelekanga 'Ukwakha' ('ukwakha')
Ukunyamekela kuthwala iNgqungquthela yama-25
Yeka i-Consonant (Phonetics)
'I-Catcher kwi-Rye' Imibuzo yeSifundo & Ingxoxo
Iingoma eziphambili zeeNgoma - 2006
Ukubhola iJack: Ukusuka kweThuthi ukuya kwiiBlues
Oothixo noothixokazi kwi-Mythology naseNkolweni
Iimfazwe zeNkwenkwezi zokuThumela kunye neziXhobo
I-Restlenake enkulu kunazo zonke eTexas
I-PBS Islam: Ubukhosi bokholo
Incwadi efundwayo yePiano Lesson
Isicwangciso sePoot Poker